ငပလီကမ်းခြေက သဲဖြူများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ယူနေခြင်း အလျင်အမြန် ရပ်တန်.သင်. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငပလီကမ်းခြေက သဲဖြူများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ယူနေခြင်း အလျင်အမြန် ရပ်တန်.သင်.
ငပလီကမ်းခြေက သဲဖြူများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ယူနေခြင်း အလျင်အမြန် ရပ်တန်.သင်.
- Kaung Say Chin
Posted by Kaung Say Chin on Sep 26, 2012 in Copy/Paste |6comments
ငပလီကမ်းခြေ သည် မြန်မာ ပြည် ရှိ တစ်ခု ထဲ သော ထူးခြား ထင်ရှားပြီး သာယာလှပ သော အပန်းဖြေ ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင် ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ထင် ရှားလှ ပါသည်။ ယ္ခု အခါ ဟိုတယ် များစွာ ဖွင်.လှစ် လုပ် ကိုင် လျက်ရှိ ပြီး နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားသား ခရီး များစွာ လာရောက်လည်ပါတ်နေပြီး နိုင်ငံ တော် အတွက်လည်း ၀င်ငွေရ၊ ဒေသခံ များအတွက် လည်း အလုပ် အကိုင် အခွင်. အလမ်း များ ရ ရှိ နေ သော အဓိက ကမ်းခြေဒေသ ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၁။ ငပလီကမ်းခြေ သဲ ပွင်.များ သည် အ ခြားအနီးအနားရှိ ကမ်းခြေ များ ( ကမ်းသာသာ၊ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင် ) တို.ထက် ဖြူဖွေးပြီး၊ သဲအရွယ်အစားမှာ လည်း မကြီးလွန်းမသေးလွန်း အနေတော်အရွယ် ဖြစ် နေ ပါသည်။ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် ကမ်းခြေများစွာ ရှိသည် အနက် အနည်းငယ်မျှသာ ထိုသို. ဖြူဖွေးသော သဲသောင် ရှိပါသည်။ သဲဖြူလျှင် လည်း သဲ အရွယ် အနေတော်ဖြစ်ရန် မလွယ် ကူပါ။ သဲ မှုန် လွန်း လျှင် မြေစေး ဆန် ပြီး ခြေထောက်များတွင် ကပ်လေ ရှိ သော ကြောင်. ကမ်းခြေနှစ်သက် သူများ မကြိုက် ကြပါ။ အကယ်ရွေ. သဲလုံး ကြီး ပါ က ခြေထောက်များ နစ်ဝင်လေ.ရှိပြီး လမ်းလျောက်သွားရသည်မှာ အစဉ်မပြေပါ။ အနေတော် သဲပွင်. ဖြစ် ပါက ကမ်းခြေနှစ်သက် သူများ အလွန်ကြိုက် ကြပါသည်။
၂။ဂျိတ္တော အနီး ပုလဲကျွန်း နားမှ စ ရွေ. သဘာဝအလျောက် ဖြစ်တည် နေ သော သန္တာ ကျောက်တန်း သည် ဆင်ခေါင်း တ၀ိုက် ထိ ငပလီ ကမ်းခြေကို ရံတားလျက် ရှိသည်။ ထို.ကြောင်. ငပလီကမ်းခြေ တလျောက် ပင်လယ်ရေသည် ဖေါက်ထွင်းမြင် နိုင် အောင် ကြည်လင်ခြင်း၊ မိုးကောင်းကင် ကဲ.သို. ပြာလဲ.နေသော အရောင် ရှိခြင်း၊ အခြားကမ်းခြေများကဲ.သို. ငလိပ်ကျောက်၊ ရေခူ၊ ဂျပ်မြွေ။ ငမန်း စသည်. အန္တရာယ် ရှိသည်. သတ္တ၀ါများ မ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ အန္တရာယ် များ မရှိခြင်း တို. သည် လွန်စွာ ထူးခြား လှပါသည်။
၃။ကမ်းခြေတစ်လျောက်တွင် အုန်းပင်များ စီတန်း ပေါက်ရောက်နေ ပြီး ကမ်းခြေ ပျက်စီးမှု ကို တားဆီးထားခြင်းသည် လည်း ထူခြားချက်တစ်ရပ်ဖြစ်နေပါသည်။
္ပ္ပထိုကဲ. သို.ထူးခြားလှသော ငပလီငွေသောင်ယံသဲ မှုန်များမှာ အကန်.အသတ်ရှိသော သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ သဘာဝအလျောက် ရံတားထား သော သန္တာ ကျောက်တန်း ကြောင်. သာ လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ် မသွား ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို.သော် အကယ်ရွေ.သဲဖြူ ၅ တန် ရှိသည် ဆိုပါက မိုးတွင်း ကာလ ပင်လယ် မှ ၎င်းသဲ ၅တန်ကို ဆွဲချသွား ပြီး ပွင်.လင်း ရာသီဧည်. သည် ရာ တွင်ပင်လယ်မှ ၎င်းသဲ ၅တန်ကိုပင်ပြန်လည်ပို.ချလေ.ရှိသည်။ လည်ပါတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ် ၍ သဲဖြူ ၅ တန် မှ လူက သဲဖြူ ၁ တန်ကို ထုတ် ယူပါက ပင်လယ်မှ ၄ တန်ကို သာ ပြန်လည်ပို.ချနိုင် တော.သည်၊ အသစ်တိုက်စားလာ သော သဲများ မှာ သဲဖြူ များ မဟုတ် ပါ။ အကြောင်းမှာ ငပလီအနီးတောင်များမှအပေါ်ယံကျောက်မာများကို တိုက်စားပြီး နောက် ယ္ခု အခါသဲကျောက်များသာ တိုက်စားရန်ကျန်ရစ်တော.သည်။ထို.ကြောင်. သာ ငပလီ၏ သဲမှလွဲ၍ အခြားအနီးပါးကပ်လျက်မှ ကမ်းခြေသဲများမဲနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ ရံတားထား သော သန္တာ ကျောက်တန်း မရှိခဲ.ပါက ယ္ခုအခါ ငပလီ၏ သဲမှာ လည်းမဲနေမည်သာတည်း။
သို.ဖြစ်ပါရွေ. တန်ဘိုးကြီးမား လှသော သဘာဝလက်ဆောင်မွန် ငပလီ ငွေသောင်ယံ မှ သဲဖြူများကို ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ထုတ်ယူသုံးစွဲ နေခြင်း ကို အလျင်အမြန် ဥပဒေ ဖြင်.ရပ်တန်.သင်.ကြောင်း၊ ငပလီ သံတွဲသားများ မှ ကာကွယ်နိုင် ကြပါရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
About Kaung Say Chin
Kaung Say Chin has written3post in this Website..
View all posts by Kaung Say Chin →
ဘယ်သူတွေလဲတော့ မသိဘူးပေါ့နော် … သဲတွေကို အကွက်ရိုက်ရောင်းစားနေကြတယ် …
၁ ကျင်း ကို ဘယ်လောက် နဲ့ပေါ့နော် …. ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေ လို့တော့ ပြောသံ
ကြားမိပါတယ် … ဟုတ်/မဟုတ်တော့ မသိဘူးပေါ့နော် …
ကမ်းခြေရဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေ စုပေါင်းပြီးစာတင်ရင်တော့ အဆင်ပြေမလားမသိပေါ့နော် …
ဒါပေမဲ့လည်း ဟိုတယ်တွေ ဆောက်လုပ်နေရတာ ပင်လယ်သဲနဲ့ပဲလေ …
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေကလဲ အထက်ကို ပေးရသေးတယ် ပြောသံကြားမိပြန် ..
ဘယ်က အထက်လဲတော့ မသိဘူးပေါ့နော် ….။
အတိုင်အဖောက် တော်တဲ့နရာမှာ လေးစားစရာဘဲ။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းကြဘို့ 
ငပလီဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရတနာတစ်ခုပါ။မပျက်စီးရအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေ နေရာတော်တော်များများကို တိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့
ကောင်းစေချင်ရဲ့ ဒီစာလေးက တကယ့်ကို အဖိုးတန်ပါပဲ။
အာဏာပိုင်တွေကလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လည်း သဲယူရမယ့်နေရာ သတ်မှတ်ပေးမယ်၊ အဲဒီနေရာကလွဲလို့ယူရင် ဘယ်လိုဆိုတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကောင်းမှာပါ။
ဒီနှစ် ရေတိုက်စားတာ အမတ်တ ကော ။ ဟိုတယ်ကြီး ဘေးက ဦးကျော်စီန် ဟိုတယ် တို့ ရှေ့ တံတိုင်းတွေ ပြိုကျ လှိုက်စား တာ ခံလိုက်ရတယ် လို့ သိရပါသည် ။